ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံ - ဝီကီပီးဒီးယား
ကိုဩဒိနိတ်: 46°N 25°E﻿ / ﻿46°N 25°E﻿ / 46; 25
နိုင်ငံတော် သီချင်း: "Deșteaptă-te, române!"
ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံ၏ တည်နေရာ (အစိမ်းရင့်)
– ဥရောပသမဂ္ဂတွင် (အစိမ်းရောင်) – [Legend]
—၈၁.၀% ရိုမေးနီးယား အော်သိုဒေါ့
ပြည်ထောင်စု တစိတ်တပိုင်း သမ္မတစနစ် သမ္မတနိုင်ငံစနစ်
Florin Cîțu (ယာယီ)
• ပထမဆုံးသော ရိုမေးနီးယား နိုင်ငံတည်ထောင်သော အဖွဲ့အစည်းများ
c. ၈၉၅ / ၁၂၄၇a
• ဝါလရှီယား မင်းသားနယ်
• မော်ဒေးဗီးယား မင်းသားနယ်
• ထရန့်ဆာဗေးနီးယား မင်းသားနယ်
• ရဲရင့်သူ မိုက်ကယ်လက်အောက် ပထမဆုံးသော စည်းမျဉ်းတစ်ခုတည်းဖြင့် အုပ်ချုပ်ခြင်း
• ညီညွှတ်သော မင်းသားနယ်များb
၁၈၅၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၄ ရက်
• အော့တမန် အင်ပိုင်ယာမှ လွတ်လပ်ရေးရရှိခြင်း
၁၈၇၇ ခုနှစ် မေလ ၉ ရက်/၁၈၇၈ ခုနှစ်c
• ရိုမေးနီးယား ဘုရင့်နိုင်ငံ
၁၈၈၁ မတ်လ ၁၄ ရက်
၁၉၁၈ / ၁၉၂၀e
• ယနေ့ခေတ်နိုင်ငံ တည်ထောင်ခြင်း
၁၉၈၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၇ ရက်
၂၃၈,၃၉၇ km2 (၉၂,၀၄၆ sq mi) (အဆင့်: ၈၁)
• ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက် ခန့်မှန်း
၁၉,၁၈၆,၂၀၁ (အဆင့် - ၆၁t)
၈၀.၄/km2 (၂၀၈.၂/sq mi) (အဆင့် - ၁၃၆)
$၆၃၆.၄၈၁ ဘီလီယံ (အဆင့် - ၃၆)
$၃၂,၉၅၀ (အဆင့် - ၄၄)
$၂၈၉.၁၃၀ ဘီလီယံ (အဆင့် - ၄၇)
$၁၄,၉၆၈ (အဆင့် - ၅၆)
အလွန်မြင့် · ၄၉
ရိုမေးနီးယား လျူ (RON)
A Vlach duke ruling Transylvania around 895, Gelou, is mentioned alongside Glad (duke) and Menumorut in the late 12th century Gesta Hungarorum (the reliability of which is debated);a1247 royal charter, known as the Diploma of the Joannites, mentions four Romanian Knez (Vlach leader) (or polities) in Muntenia and Oltenia.
Romania in the interwar period, following the Union of Transylvania with Romania in 1918 including Bessarabia, Bukovina, Transylvania, parts of Banat, Crișana and Maramureș, established after the Paris Peace Conference closing World War I in 1920.
Monarchy was abolished on 30 December 1947 upon the proclamation of the People's Republic and was changed with the 1965 Constitution of Romania upon its adoption on 21 August 1965 as the Socialist Republic. The Communist regime fell on 22 December 1989, the new democratic government was installed on 20 May 1990 and the new post-communist Constitution of Romania was adopted on 21 November 1991. Romania joined the European Union on 1 January 2007.
အခြားသော ဥရောပသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့် မျှဝေ၍ .eu ဒိုမိန်းကို သုံးစွဲသည်။
ဒန်းညုမြစ်ဝှမ်း အောက်ပိုင်းမှ လွတ်လပ်သောနိုင်ငံရူမေးနီးယားနိုင်ငံသည် ဥရောပတိုက်တွင် ဆိုဗီယက်ယူနီယံက လွဲလျှင် ရေနံအများဆုံး ထွက်သော နိုင်ငံဖြစ်၏။ ၁၉၈၉ ခုနှစ် တော်လှန်ရေး အပြီး၌ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ နှင့် ဈေးကွက်စီးပွားရေး စနစ်သို့ ဦးတည် လာခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ ရူမေးနီးယားနိုင်ငံသည် ဥရောပတိုက်အရှေ့တောင်ပိုင်းတွင် ဒန်းညုမြစ်ဝှမ်းအောက်ပိုင်း ၌ တည်ရှိသော နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ အကျယ်အဝန်းအားဖြင့် ၉၂,၀၄၃ စတုရန်း မိုင်ရှိ၍ လူဦးရေမှာ ၂၁ သန်း (၂၀၁၁) ရှိ၏။ ရူမေး နီးယားနိုင်ငံ၏ နယ်နိမိတ်မှာ အနောက်ဘက်တွင် ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ နှင့် ဆားဘီးယားနိုင်ငံ၊ အရှေ့မြောက်ဘက် နှင့် အရှေ့ဘက်တွင် ယူကရိန်းနိုင်ငံနှင့်မော်လ်ဒိုဗာနိုင်ငံ၊ တောင်ဘက်တွင် ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံတို့နှင့် ဆက်စပ်လျက် ရှိသည်။ ထို့ပြင် အရှေ့တောင်ဘက်၌ ၁၅၂ မိုင်ခန့် ရှည်လျားသော ပင်လယ်နက် ကမ်းခြေဒေသလည်း ရှိ၏။
ရူမေးနီးယားနိုင်ငံရှိ မြစ်များသည် များသောအားဖြင့် ကာပေသီယန်တောင်တန်း၌ မြစ်ဖျားခံ၍ ဒန်းညု မြစ်ထဲသို့ စီးဝင်ကြသည်။ ဒန်းညုမြစ်သည် နိုင်ငံ၏တောင်ဘက် နယ်နိမိတ် တစ်လျှောက် စီးဆင်းလာပြီးလျှင် မြောက်ဘက်သို့ ကွေ့တက်၍ ပရုမြစ်နှင့် ပေါင်းဆုံကာ ပင်လယ်နက်ထဲသို့ စီးဝင်သည်။ ဒန်းညုမြစ်သည် မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဒေသတွင် ချီလီယာမြစ်၊ စူလီနာမြစ်နှင့် စဖန့်တူးလဂီယော်ဂေ (စိန်ဂျော့)မြစ်ဟူ၍ မြစ် သုံးမြွာ ခွဲလျက် စီးဆင်းသည်။( ဒန်းညုမြစ်။) အခြား ထင်ရှားသော မြစ်များမှာ ကရစ္စမြစ်၊ မူးရက်ရှမြစ်၊ အားဂျက် မြစ်၊ ယားလိုမစ္ဆမြစ်နှင့် ဆီးရက်မြစ် စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ငါးဖမ်းရာ အိုင်များနှင့် ဆေးစမ်းများလည်း ရှိလေသည်။ ရာသီဥတုမှာ ဆောင်းရာသီ၌ အရှေ့မြောက်ဘက်မှ လေအေး တိုက်ခတ်သဖြင့် အပူချိန်သည် ရေခဲမှတ်အောက်သို့ ကျဆင်း၍ ဒန်းညုမြစ်တွင်း၌လည်း ရေခဲများဖြင့် ပိတ်ဆို့လျက် ရှိ၏။ ဆောင်းရာသီသည် ဒီဇင်ဘာလမှ မတ်လအထိ ကြာရှည် သည်။ နွေရာသီတွင် ပူသော်လည်း မိုးရွာလေ့ရှိသည်။ တောင် ကုန်းဒေသများ၌ မိုးများသည်။ ပင်လယ်နက်ကမ်းခြေ တစ်လျှောက်တွင် မိုးနည်းသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကား တစ်နိုင်ငံလုံးလိုလိုတွင် စိုက်ပျိုးဖြစ်ထွန်းလောက်အောင် မိုးအလုံအလောက် ရွာသွန်းသည်။
ရူမေးနီးယားနိုင်ငံသည် ဥရောပတိုက်တွင် ရေနံအထွက်များသောနိုင်ငံ ဖြစ်၏။ ရေနံတွင်းအားလုံးလိုလိုပင် နိုင်ငံ၏ တောင်ပိုင်း၌ ပလိုယက် စတီ၊ အိုလတီးနီယနှင့် အားဂျက်ဒေသများတွင်၎င်း၊ အရှေ့ ပိုင်း၌ ဗကုအူးဒေသတွင်၎င်း တည်ရှိ၏။ ရေနံချက်စက်ရုံ အများအပြားပင် ပလိုယက်စတီ မြို့တွင် ရှိသည်။ ရေနံလုပ်ငန်း အတွက် အချက်အချာမြို့ဖြစ်၏။ အွန်နက်စတီ၊ ဗော်ဇက်စတီ နှင့် ဗရပ်ရှော့တို့ တွင်လည်း ရေနံချက်စက်ရုံသစ်များ ဆောက် လုပ်ပြီး ဖြစ်သည်။ ရေနံကို နိုင်ငံခြားသို့ တင်ပို့ရောင်းချရန် အတွက် ပင်လယ်နက်ကမ်းခြေသို့ ပိုက်လုံးများဖြင့် ပို့ပေး လေသည်။ အခြားထင်ရှားသော တွင်းထွက်ပစ္စည်းများမှာ သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ ဆား၊ ကျောက်မီးသွေးညို၊ သံ၊ ခရိုမီယံ၊ မိုလစ်ဒီနမ်၊ ကြေးနီ၊ သွပ်၊ ဗောက်ဆိုက်၊ ရွှေ၊ ငွေ စသည်တို့ ဖြစ်သည်။
ရူမေးနီးယားနိုင်ငံတွင် အယူဝါဒရေးရာ လွတ်လပ်မှုရှိ၏။ ရူမေးနီးယားလူမျိုးတို့သည် များသောအားဖြင့် အရှေ့ပိုင်းအသင်းတော်ဝင် ခရစ်ယာန်များ ဖြစ်ကြလေသည်။ ရှေးအခါက ရူမေးနီးယားသည် ဒေးရှားဟု အမည်တွင်ခဲ့၍ နှစ်ရာစုတွင် ရောမဧကရာဇ် ထရေဂျန်၏ လက်အောက်ခံ ပြည်နယ်တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့၏။ သုံးရာစုနှစ်မှ အစပြု၍ တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ လှည့်လည်သွားလာနေတတ်သော လူမျိုးစု အမျိုးမျိုးသည် ဒေးရှားနယ်ကို ဖြတ်သန်းသွားလာခဲ့ကြ၏။ ခရစ်တော် ပေါ်ပြီးနောက် ပထမအနှစ် ၁ဝဝဝ အတွင်း ဒေးရှန်းလူမျိုးနှင့် ရောမလူမျိုးတို့ သွေးနှောသွားကာ၊ ထိုနောက် ဆလဗ်လူမျိုး တို့ပါ ဒွေးရောယှက်တင် ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးနောက်တွင် ရူမေးနီးယား ဘာသာစကားနှင့် ရူမေးနီးယား လူမျိုးဟူ၍ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ လေသည်။ ထိုနောက် ၁၄ ရာစုနှစ်တွင် ဝေါလေ့ကီးယားနှင့် မော်လဒေးဗီးယားဟူသော ပြည်နယ်နှစ်ခု ပေါ်ပေါက်ခဲ့လေ သည်။
↑ Constitution of Romania။ Cdep.ro။
↑ Reservations and Declarations for Treaty No.148 – European Charter for Regional or Minority Languages။ Council of Europe။
↑ Ministers of the Romanian Government (in en)။ Government of Romania။
↑ Elgie၊ Robert (28 November 2017)။ Political Leadership: A Pragmatic Institutionalist Approach။ Springer။ ISBN 9781137346223 – via Google Books။
↑ Romania Directory။ Editura Cronos။ 1 April 1990။ ISBN 9789739000000 – via Google Books။
↑ DECRET-LEGE227/12/1989 - Portal Legislativ။
↑ Populația rezidentă la 1 Ianuarie 2021 (in ro)။ National Institute of Statistics (Romania)။
↑ Populaţia rezidentă pe sexe şi vârste, la 1 Ianuarie 2021 (in ro)။ National Institute of Statistics (Romania)။
↑ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named CensusRef
↑ ၁၀.၀ ၁၀.၁ ၁၀.၂ ၁၀.၃ World Economic Outlook Database, April 2021 Edition။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့။
↑ 2020 Human Development Report။ ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးမှု အစီအစဉ် (2020)။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံ&oldid=728473" မှ ရယူရန်
ရိုမေးနီးယားဘာသာစကား ပါဝင်သော ဆောင်းပါးများ
ဤစာမျက်နှာကို ၁ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၀၉:၅၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။